Zonke izithuba ngu: Wisdomepowder
I-cycloastragenol (i-CAG): IziBonelelo, i-Dosage, Iziphumo zeSide
1. Yintoni i-cycloastragenol (CAG) i-cycloastragenol yintsusa yendalo ekhutshwayo kwaye ihlanjululwe kwingcambu ye-Astragalus membranaceus herb. Isityalo se-astragalus besisetyenziswa kumayeza amaTshayina esiNtu (i-TCM) kangangeenkulungwane kwaye sisasetyenziswa kumayeza ahluka-hluka amayeza I-Astragaloside IV zezona zithako ziphambili zisebenzayo kwi-astragalus membranaceus, efumaneka kancinane… Qhubekeka ukufunda
2020-04-10 isilumkiso nezongezo
1. Kutheni sifuna iNicotinamide Mononucleotide (NMN) Nangona ukwaluphala kungenakugwenywa, kukho amathemba okutshintsha inkqubo, ngenxa yeNicotinamide Mononucleotide (NMN). Ukuphila de ube mdala uvuthiwe liphupha lakhe wonke umntu kwaye kukho izinto ezifana ne-NMN ezisinceda sifezekise iphupha. Ndiyazi ukuba mhlawumbi uyazibuza ukuba ingaba le ndawo inxibelelana njani… Qhubekeka ukufunda
2020-04-03 isilumkiso Ukuhlaselwa ngenkani
I-L-Ergothioneine (i-EGT): Ukutya ‐ Kufunyenwe ngentsholongwane ka-antioxidant onokubakho kunyango
1. IiVithamini eziphila ixesha elide i-L-Ergothioneine (EGT) L-Ergothioneine (EGT) ikwabizwa ngokuba yi "Vithamini yexesha elide". Iivithamini zokuphila ixesha elide zibhekisa kwizakha-mzimba kubandakanya iivithamini, iiminerali kunye nezinye izinto eziphambili kwinzala yokuguga. Uluhlu lweevithamini ezihlala ixesha elide nguBruce Ames zibandakanya ivithamini A, i-vithamini B1, i-vithamini B2, iivithamini B6, iivithamini B12, i-biotin, i-vithamini C, i-choline, i-Vitamin D, i-Vitamin E,… Qhubekeka ukufunda
2020-03-31 isilumkiso Ukuhlaselwa ngenkani
I-Linoleic Acid ehlanganisiweyo (i-CLA): IziBonelelo, iDosi, kunye neziphumo ezibi
1. Yintoni i-Linoleic Acid (CLA) edityanisiweyo? I-linoleic Acid edityanisiweyo (i-CLA) luhlobo lwendalo lwe-polyunsaturated, i-omega-6 fatty acid. Imithombo ephambili yokutya ye-linoleic acid edibeneyo yinyama kunye nobisi kwizinto ezibomvu ezifana neenkomo, iibhokhwe kunye neegusha. Inani lilonke le-CLA kulondawo ixhomekeke kwinto yokondla izilwanyana ... Qhubekeka ukufunda
2020-03-27 isilumkiso nezongezo
1. Yintoni u-Oleoylethanolamide (OEA)? I-Oleoylethanolamide (OEA) ngumlawuli wendalo wobunzima, cholesterol, kunye nokutya. I-metabolite yenziwa ngamanani amancinci amathumbu amancinci. Imolekyuli yendalo inoxanduva lokuziva uzele emva kokutya. I-Oleoylethanolamide incedisa kummiselo wamafutha omzimba ngokubopha iPeroxisome proliferator-activated receptor alpha (PPAR-Alpha). … Qhubekeka ukufunda
2020-03-24 isilumkiso Nootropics
Yintoni iPyrroloquinoline quinone (PQQ)? I-Pyrroloquinoline Quinone (PQQ) yimolekyuli encinci ye-quinone enezinto ezinjengeevitamin ezifana ne-Dihexa (PNB-0408) powder. Ikhompawundi yi-arhente enamandla ye-redox ephindwe kabini njenge-antioxidant. Ke ngoko, izinzile kwaye ibaluleke kakhulu kwezonyango kunyango lwe-neurodegeneration. Izifundo ezininzi zeklinikhi ziqinisekisa ukuba ipirroloquinoline quinone (PQQ) inamandla… Qhubekeka ukufunda
2020-03-19 isilumkiso nezongezo
1. Yintoni iPalmitoylethanolamide (PEA)? IPalmitoylethanolamide (i-PEA) ekwabizwa ngokuba yi-N-2 hydroxyethyl Palmitamide okanye i-Palmitoylethanolamine yichemicals eyiliqela lama-acid amide. Kuyinto ye-lipid esebenzayo, yendalo esebenza ngokwemvelo esebenza kwi-CR2 (cannabinoid receptor) kwaye inxibelelana neeseli ezosulelayo kwinkqubo yethu yemithambo-luvo. Isongezelelo sePalmitoylethanolamide sifunyenwe sines… Qhubekeka ukufunda
2020-03-15 isilumkiso Nootropics
Ukuba ukule ndawo yentengiso ye-hormone ye-steroid, ngokuqinisekileyo uza kuhlangana ne-Dehydroepiandrosterone (DHEA) izongezo. I-DHEA iveliswa ngokwasemzimbeni kwaye inokudlala indima ebalulekileyo. Umsebenzi wayo ufundwe ngokubanzi ukufumanisa ukuba kunokwenzeka ukunyanga kwezifo ezahlukeneyo. Abo baqhelene… Qhubekeka ukufunda
2020-02-05 isilumkiso Nootropics
Isikhokelo sokugqibela seAlpha Lipoic Acid (ALA)
IAlpha-lipoic Acid ibhekisa kumacandelo endalo aveliswayo aveliswa yimizimba yethu. Le khompawundi idlala imisebenzi ebalulekileyo kwimizimba yethu kwinqanaba leeselfowuni. Phakathi komsebenzi wayo ophambili kukuveliswa kwamandla. Imizimba yethu iyakwazi ukuvelisa i-ALA okoko nje sisempilweni. Kodwa kukho iimeko apho umzimba wethu ungayi… Qhubekeka ukufunda
2020-01-29 isilumkiso nezongezo
Izigidi zabantu balapha bachitha imali eninzi kakhulu kwiimveliso zokulwa ukuguga njengeNicotinamide Riboside chloride. Nangona ukwaluphala yinkqubo yendalo, abantu abafuni kujongeka ngathi badala. Iindaba ezimnandi zezokuba, kukho iimveliso ezininzi phaya ezinganceda ngale nto kwaye iNicotinamide Riboside Chloride yenye ye… Qhubekeka ukufunda